akanjo fehezan-dalàna ho an'ny goa casino
akanjo fehezan-dalàna ho an'ny satro-boninahitra casino
akanjo fehezan-dalàna ho an'ny satro-boninahitra casino melbourne
housse de rangement sous vide geant casino
trano akaikin'ny mena vatolampy casino
Ny talata, Sandoval nanao sonia antenimieran-Doholona Volavolan-dalàna 443, izay manome lalana ny hampiasana Nevada-fahazoan-dalana sportsbooks hanaiky wagers avy amin'ny raharaham-barotra ny fikambanana, izay misolo tena dobo ny mpampiasa vola tena online casino amin'ny maimaim-poana spins. Mpanohana ny lalàna – anisan'izany ny eo an-toerana fanatanjahan-tena hilokana ny teknolojia mpamatsy CG Teknolojia (teo aloha Cantor Lalao) – mino izany dia hitondra any amin'ny mampivarahontsana tosika amin'ny betting hiatrehana in Nevada, ny hany ANTSIKA fahefana amin'izao fotoana izao navela manolotra ny tokan-tena-fanatanjahan-tena lalao wagers akanjo fehezan-dalàna ho an'ny goa casino. Saingy ny lalàna dia mamela Nevada boky tongotra tokony New Jersey hanjaka ao ny fikatsahana ny handravana ny federaly PASPA fanatanjahan-tena hilokana ny fandraràna akanjo fehezan-dalàna ho an'ny satro-boninahitra casino. Koa miandry Sandoval ny fanaovan-tsonia dia SB 40, izay nankatoavin'ny mpanao lalàna tamin'ny volana lasa teo akanjo fehezan-dalàna ho an'ny satro-boninahitra casino melbourne.
Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre housse de rangement sous vide geant casino. Nevada Gov. Ireo mpampiasa vola azo monina avy amin'ny fanjakana, kanefa dia tsy manana anjara mavitrika amin'ny famaritana ny fomba ny fikambanana ny wagers dia apetraka trano akaikin'ny mena vatolampy casino. Ny dingana efa oharina amin'ny vola ao amin'ny fiaraha-bola. CG Teknolojia efa miasa sportsbooks ao Meksika, ny Bahamas, on cruise ships sy ny fanatanjahan-tena loteria bar ao Shina, ka SB 445 tena ihany no manome CG Teknolojia politika sasany handrakotra noho ny zavatra izay efa manao.
Brian Sandoval dia nanao sonia ny fanjakana ny 'fikambanana' hilokana ny lalàna, ny fanatitra avy-of-panjakana mponina ny fahafahana wager – na dia fotsiny – amin'ny Nevada sportsbooks trano ny hofan-trano eo akaikin'ny monte casino.